Fitaovana an-dakozia, Sous Vide Cooker, Vacuum Sealer - CHITCO
CHITCO, mety ho safidy tsara ho anao!
CHITCO INDUSTRIAL CO., LTD dia naorina tamin'ny 2002, any XiXiang, Shenzhen, miaraka amin'ny SMT, atrikasa tsindrona, atrikasa fametahana metaly ary tsipika 4 mivory.Ny fahafaha-mamokatra isan-taona dia 600.000.
Araho hatrany ny vaovao farany momba anay na ny indostria
Sinoa manam-pahaizana momba ny lakozia
Sous vide mahandro sakafo
Hanomboka ny taona 2022 amin'ny maha-mpisakafo azy, andao hanomboka amin'ny anana!Ny lohahevitr'ity laharana ity dia ny " sous vide cooking " Manoro hevitra ny andian-tsakafo sous vide fandrahoan-tsakafo Manantena aho fa azo ampiasaina ho fanondroana.1. Atody mafana misy tongolo nendasina sy caviar ...
Inona no atao hoe teknolojia fandrahoan-tsakafo ambany?
Raha ny marina dia fanehoana matihanina kokoa amin'ny sakafo mahandro miadana.Azo antsoina koa hoe sousvide.Ary iray amin'ireo teknolojia lehibe indrindra amin'ny fandrahoan-tsakafo molekiola.Mba hihazonana tsara kokoa ny hamandoana sy ny sakafo ara-tsakafo, ny foo...
Fanontaniana 10 hanampy anao mahandro amin'ny hafanana ambany
Nahita izany betsaka angamba ianao tao anatin'ny roa taona farany, ary rehefa miresaka momba ny Sous Vide miaraka amin'ny lehibenao / mpisakafoanana / mpiara-miasa / mpiara-miasa / mpiara-miasa aminao ianao, ny valin-teniny dia tsara, tsy manome tsiny azy ireo aho.Asehoy azy ireo fotsiny amin'ny manaraka Ques...
Smart famolavolana mora ho an'ny asa.Ny fandrahoan-tsakafo tsara dia mitazona ny tsiron'ny sakafo/tsiro voalohany.
CTO5OP125W Smart vacuum circulator
CTO5OP118W Smart vacuum circulator
CTO5OP116W Smart vacuum circulator
Ireo singa mifandraika amin'ny CTO5OP102W
Ireo singa mifandraika amin'ny CTO5OP101W
Ireo singa mifandraika amin'ny CTO5OP107W